Plasticlọ plastik PVC, nhọrọ kachasị mma maka ụlọ ọgwụ-News-Topflor China amachi
Echiche:66 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-10-14 Mmalite: Saịtị
2020 bu afo puru iche. Ọrịa pneumonia ohuru ohuru nwere mmetụta dị ukwuu na ndụ niile. Ọ dabara nke ọma, mgbe ịrụsi ọrụ ike, ọrụ mkpuchi ọrịa na-efe efe n'ụlọ ọhụrụ na-arụ ọrụ arụpụtala ezigbo nsonaazụ. N'ime oge a, anyị nwere ma Iji gbochie ma chịkwaa ọrịa ahụ, ọ dị mkpa iji hụ na ọrụ ụlọ ọgwụ na-arụ ma wulitekwa usoro nlekọta ahụike na ahụike dị mma ma dị mma karị. Lọ ọgwụ nwere nnukwu mmadụ na gburugburu ebe obibi pụrụ iche. Lọ ụlọ ọgwụ ahụ nwere nnukwu ihe dị mkpa maka nchebe gburugburu ebe obibi, ịdị ọcha na nchekwa. Floorlọ ụlọ ọgwụ kwesịrị ịdị na gburugburu ebe obibi, antibacterial, na non slider.
Ma ọ bụ ụlọ ọgwụ dị elu ma ọ bụ ụlọ ọgwụ nke onwe, ọtụtụ ụlọ ọgwụ anyị na-ahụ taa na-ahọrọ PVC plastic dị ka ihe ala. Ọ na-eguzogide ọgwụ stains, na-abụghị amị amị, na mfe ọcha. O nwekwara mmegide corrosion, nguzogide kemịkal, antibacterial na antibacterial properties, Ndị ụlọ ọgwụ na-akwanyere ùgwù nke ukwuu.
Site na nhazighari nke nchedo gburugburu ebe obibi, ihe ndi mmadu choro maka nchedo gburugburu ebe obibi, ulo oru ogwu, ulo ogwu na ebe ndi ozo puru iche na adiwanye elu, nke na - eduga na obere ihe nke ihe ala, tinyere marble na terrazzo. Mgbe okwute enweghị ike izute ọkọlọtọ eji mee ihe na ebe ndị a, PVC ala dị larịị na-eme ka adịghị mma nke ihe eji eme ala ọdịnala ma bụrụ ndị mmadụ nwere ihu ọma dị ukwuu.
Plastickwanyere plastic flooring na-kasị mere nke coiled ihe. Ntinye ya na iwu ya dị mfe na ngwa ngwa. Ojiji nke teknụzụ ịgbado ọkụ na-enweghị ntụpọ nwere ike nweta ọnọdụ na-enweghị ntụpọ, na-ebelata ịdị adị nke nkuku nwụrụ anwụ, na-ezere nkuku nwụrụ anwụ iji chekwaa unyi, na-ebelata uto nje, na ị na-enye eriri nhicha maka mma, ọ bụ ihe ọ bụla karịa ezigbo ala ihe ịhọrọ maka a ebe obibi ụlọ ọgwụ nwere nnukwu ọgwụ ịga ụlọ ọgwụ. Plasticlọ plastik PVC nwere ọtụtụ agba na ụdị, nke nwere ike izute mkpa imewe nke gburugburu oghere ahụike dị iche iche na oge post-ọrịa.
PVC ala, kwupụta ụdị gị!